» स्वर्ग कहाँ छ ?
स्वर्ग कहाँ छ ?
२६ श्रावण २०७६, आईतवार ०७:०७
जगत अर्थात पृथ्वी भनेको के हो ? त्यसमा रहेको माटो लगायत खनिज पदार्थ, पानी,जैविक विविधता,वनस्पती, जीव, जन्तु र त्यहाँ बस्ने मानवको के अर्थ छ ? त्यसको कुनै मुल्याङ्कन आजसम्म कसैले गरेका छन् ? थाहा छैन यहाँका चेतना भएका नभएका मानिसलाई तिनले के बुझेका छन् ? त्यो पनि थाहा छैन । त्यस्ता मानिसले जीवन र जगतलाई कसरी बुझेका छन् होला ? खान, सुत्न, हिड्न, बस्न, वोल्न समेत केही गर्न नजान्ने । कहिले र कसरी जान्ने ? एक थाल भात खान जान्ने दिसा गर्न नजान्ने, विवाह गर्न जान्ने, जन्माउन जान्ने, हुर्काउन, पढाउन, पढ्न नजान्ने। अनि आफ्ना बालबच्चा, पत्नी, श्रम निम्ति बेच्ने, बलात्कारै गर्ने, अझ पैसा तिरेर मार्न लगाउने सम्मको काम के गरेको होलान् ?
यी र यस्ता मानिसका विच बनेका देशका नेता कस्ता होलान् । ति बुद्धि गुमेकाबाट पृथ्वीले के पाउला ? वन विनास अनि वातावरणीय प्रभावले जीवन र जगत जोगाउँने हिमालमा हिउँ पग्लने । पानीको अभाव हुने । भनेका जीवन र जगतको अन्त्य हुने कुरा निश्चित छ । पृथ्वी अन्त्य गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ? वन विनास, खनिज पदार्थ जथाभावी निकाल्ने, कार्बन उडाउने आदि आदि । संसारभरिका अन्य देशको धन लुट्ने,आफनो देशमा सो धन थुपार्ने, उत्पीडित देशका मानिसको रगत पसिना लिने खाने, साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुका विरुद्ध ति उत्पीडित मानिस कहिल्लै एक हुन नसक्ने ? अनि किन हुन पर्‍यो एक । एक भए त मानिसको जीवन अर्कै हुने भयो । बेकार ∕ स्वर्ग कहाँ छ, थाहा छैन । मरेपछि स्वर्ग भेटिन्छ । बाचुन्जेल स्वर्ग देख्न सकिदैन । पृथ्वीमा नभएको चिज बस्तु के होला जुन मानिसले उपयोग गर्न पाउँछन् । स्वर्गमा के होला ? स्वर्ग कहाँ होला ? कसैलाई थाहा छैन । आजसम्म स्वर्गमा कोही गएर अनुभूति गरेर फर्केर आएको कसैलाई थाहा छैन । देवी,देवता, भगवान, ईश्वर, यशु, बुद्ध, अल्लाह आदि इत्यादिको नाममा दुनियाँका चेतना नभएका मानिसहरुलाई विभिन्न प्रकारले ठगीएको छ, झुक्याईएको छ । तिनै धर्मका नाममा हिंसा भड्काईएको छ । फाइदा लिएको छ । बसी बसी खाएका छन् । धर्मका नाममा मानिसले मानिसलाई मारेका छन् । कसलाई ? के का लागि ? पृथ्वीमा के नपुग्दो छ ? कसैले भन्न सक्छ ? मलाई पुग्दैन, त्यसैले मैले त्यस्तो गरेको भनेर ? जन्मदा कसले के लिएर आएको छ ? जुन वस्तु चिज (सम्पती) कसैले प्राप्त गरेको छ,भने जन्मेपछि पृथ्वीको सम्पति पाएको छ । बल प्रयोग गरी आफ्नो भनि कब्जामा लिएको छ । सेना पुलिस लगाएको छ । अदालत प्रयोग गर्दछ । पृथ्वीको सम्पती के साझा सम्पती होइन ? पृथ्वीको सम्पतीलाई के मेरो सम्पती भन्न मिल्छ ?
संसारका श्रमजीवी गरिव, किसान मजदुरले काम गरेका छैनन् ? तिनले दिनरात काम गरेर पनि सामान्य जिवन जिउन, बाच्न सम्म पाएका छैनन् । एक गाँस खान र एक जोर कपडा लाउन के हुनेखानेको मुख ताक्नुपर्ने ? तिनले काम गर्ने कारखाना, खेत, जमीन के तिनले जन्मदै प्राप्त गरेका हुन्? ति सम्पति काम गर्नेहरुको हुनुपर्ने होइन ? ति सम्पति किन ति गरीव श्रमिकले प्राप्त गरेनन् । सातौं पुस्ता तिनका विरुद्ध संघर्ष गर्दा पनि आनन्द (मुक्ती) संग बाच्न नपाईने ? संघर्षमा रहेकाहरुले धोका दिनुपर्ने ? अनि पुन संघर्ष गर्नुपर्ने ?धोका नदिई अघि वढ्नेका विरुद्ध विष मनन् गर्नुपर्ने ? चेतना छैन । कहाँ गयो तिम्रो त्यो चेतना ? कति मानिस मारियो संसारमा ?अन्यायका निम्ती, न्यायका निम्ती,त्यसको हिसाव किताव छैन । कसले के का लागि मारे ति मानिस ? कसैले कसैलाई मार्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर मारिन्छ यहाँ । काम अरुलाई, कमाई आफुलाई गर्न खोज्नेहरुले मात्र यस्तो कार्य गर्छन् ।
हिन्दु चढेको रेलमा हिन्दुले बम हान्ने ? अनि मुसलमानले बम हान्यो भनेर मुसलमान मार्ने, मुसलमान चढेको रेलमा बम हान्ने अनि हिन्दुले बम हान्यो भनेर हिन्दु मार्ने । हिंसा आफै गर्ने अनि पुन : हिंसा गर्ने । तिनको चेतना,दिमाग अन्यत्र मोड्ने, यस्तो अचम्मको काम भैरहेको छ पृथ्वीमा । धर्मको हाँगा हेर्नुहोस् त ∕ सबैले भन्छन् ईश्वर एउटै हो । अनि एकले अर्कोलाई किन हेपेको ? होच्याएको ? सबैले आफ्नो मात्र राम्रो भनेको किन ? राम्रो नराम्रो भन्न पाउने कसलाई छ हक ? प्रवचन, गाना, भजन गाएर खेत, कारखानामा काम हुन्छ ? के फलाउने, उत्पादनको काम कसले गर्ने ? गाडी, हवाईजहाज,चलाउने, खेत, कारखानामा काम गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कति छन् कति ? काम गर्ने धेरै छन् कि काम नगर्ने धेरै छन् ? संसारमा धेरै चोर डाँंका छन् कि सज्जन ? श्रमिक धेरै छन् ?
पृथ्वीमा जति भौतिक परिवर्तन भएका छन् । के ति परिवर्तन श्रमिकले गरेका होइनन् ? लुटेराहरुले गरेका हुन् ? के ति भौतिक महल संरचनामा बस्न ति निर्माता श्रमिकले पाएका छन् ? पानी चुहिएको छाप्रा छन् । जमिन छैन,जमिन लिन त्यही डांकाहरु आउँछन् । बल (शक्ति) तिनकै छ, पैसा श्रमिकलाई ठगेर लिएकै छ । प्रशासन, सरकार, न्यायालय तिनकै छ । ओहदामा बस्ने पनि त्यस्तै, तिनलाई पनि पैसै चाहिएको छ । अनि ति सवै चोर, डांकासार्वजनिक र सरकारी सम्पती लुट्ने, श्रमिकको पसिना समेत लुट्ने ।
यी कुरा आधुनिक बैज्ञानिक समाजवाद-साम्यवादका प्रवर्तक कार्लमाक्सले आफ्नो अध्ययन दस्तावेजमा लेखेकै छन् । श्रम र समय लुटेपछि मात्र धनी हुने नत्र कोही धनी नहुने । यस्तो सिद्धान्तका पक्ष र विपक्षमा संसारमा युद्ध चलिरहेको छ । नारीको हित पुरुषबाट, बाख्राको गोठालो बाट , गरिबको हित धनीबाट, रिक्सा चालकको हित रिक्साधनिबाट हुन सक्दैन । यहाँ गरिबका नाममा ठगी खान पल्केका भेषधारीपनि छन्,छलछाम गर्ने अन्य कति छन् कति ? यी कुरा बुझेपछि मुक्तिको बाटो थाहा पाईन्छ ।
संसारमा जति मानिस जन्मन्छन् । जहाँ जन्मन्छन् । जहाँ जन्मेपनि मानिसको पृथ्वी माथिको उत्तिकै अधिकार हुनपर्ने हो । तर भएको छैन । भिसा लगाएको छ । जान दिईदैन । किन नदिईएको जान ? अर्काको देशमा हस्तक्षेप गर्ने, त्यहाँको धन लिएर आफ्नो देशमा लैजाने । त्यहाका मानिसलाई लडाउने, जुधाउने, आफू सम्पन्न हुने गरिएको छ । शक्तिको भरमा दुनियामा समस्या नै समस्या खडा गरिएको छ । राम्रो हिमालय, सुन, बहुुमुल्य धन सम्पत्ति, सुन्दरता जहाँ छ त्यहाँ लडाई भएको छ ।
हिजो बेलायत जस्ता देशले भारतीय भूमीमा रजाई गरेको थियो । अंग्रेजले छाडेर गएपछि त्यहाँका मानिस पाकिस्तान र भारत भनेर जुधेको ७० वर्ष नाघिसक्यो । त्यही बेलामा कास्मीर भाग लगाएको थियो । भारतले पाकिस्तानलाई टुक्रा बनायो र बङ्गलादेश समेत अलग भयो । त्यही कारणले भारतमाथि पाकिस्तानले रिस गरिरहेको छ । अहिले फेरि कास्मीरको बारेमा संविधानमा भएको स्वायत्तता सम्बन्धी धारा भारत सकारले खारेज गरेको छ । लद्दाखमा त्यस्तै छ । यहाँ अरुणाचल दोकलाम क्षेत्रमा चीनसंग त्यस्तै छ । किन त्यो भूभागका बारेमा लडाई गरिन्छ। त्यहाँ हिमाल छ। सुन्दरता छ ।
धार्मिक ग्रन्थ अनुसार ईन्द्र स्वर्गमा अप्सरासंग रमाई रहेको बेलामा राक्षसले आक्रमण गर्छ । घमासान लडाई हुन्छ, अनि इन्द्र हार्छ भागाभाग हुन्छ । फेरी इन्द्रका मालिकलाई गुहार लगाईन्छ । लौन मेरो सत्ताहरण भयो । फेरि शक्तिशाली आउँछ र उसको राज्य फर्काउछ । यो काल्पनिक भएपनि एउटा गाइड लाईन चाँही हो । मस्तीसंग बसेपछि अर्काले डाहा गर्दोरहेछ । रमाईलो सबैलाई लाग्छ । राम्रो सबैलाई मनपर्छ। तर म मात्र रमाईलो गरौं, मै खाउ, मै लाउ भन्दा मानव समाजमा काटमार, हिंसा, हत्या जस्ता नराम्रा काम हुने हो । नेताले जनता बिर्से भने त्यही इन्द्रको ताल हुने हो । राजा महाराजाको हालत हेर्नुस् । नचाहिने काम गरिएन, चाहिने काम गरियो भने त्यो हालत हुनेछैन । त्यो उदाहरण नेलसन मण्डेला जस्ता मानिसलाई लिन सकिन्छ । हुन त महात्मा गान्धी, आब्राहम लिङ्कन जस्ता मानिस मारेका छन् । किन र कसले के का लागि मारे, पाठकवर्गहरुले यो विचार अध्ययन गरि सकेपछि बुझ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।
संसारमा शिक्षा दिने कति विद्यालय छन् तैपनि सुधार आएको छैन । त्यसैले अघिल्लो पटक लेख लेख्दा शिक्षा कस्तो पढाएछन् त भनेको हो । अमेरिकामा एकैपटक गोली हानी १०-२० जना मारिएको हुन्छ । किन मारियो ति मानिस ? धनले सुःख दिने हैन रहेछ त । धनले सुख दिने हो भने धनी मानिस नमर्नु पर्ने हो नि । तर मरेको छ । धनले केही काम गरेको छैन । अब मानिस मार्न कर्यौ देशले हतियार निर्माण गरेको छ । किन चाहियो त्यो हतियार अरुलाई मारेर आफु बाच्न ? के हतियारले मानिस बचाउने हो त ? राजदरबार काण्ड हेर्नुस्र- क्षा, र हतियारले मानिस बाँच्दो रहेछ त ? हैन नि । बुद्धि नभएपछि यस्तो गरिरहेको छ – सत्ता र मत्ता चलाउने मानिसले । अहिलेलाई यति ।
गौतम, लेखापढी कानून व्यवसायी हुन्